Shil Gaadhi: Ciyaartoy Isagoo Gaadhi Wada Seexday Iyo Wixii Dhacay
HomeNBAShil Gaadhi: Ciyaartoy Isagoo Gaadhi Wada Seexday Iyo Wixii Dhacay
TEMPE, Ariz – ciyaartoyga caanka ah ee Micael Floyd oo ka ciyaara waddanka Maraykanka ayaa seexday isagoo ku jira jidka oo wata gaadhi SUV ah, kaddib markii uu ka soo laabtay ciyaar ay kooxdiisa Cardinals guul ka gaadhay Dolphins.
Ciyaartoygan oo kubadda American Football ciyaara, ayaa kasoo noqday magaalada Miami, waxaanu ku socday xaafadda Old Town ee Scottsdale ee gobolka Arizona, waxaana sida ay boolisku sheegeen uu seexday iyadoo uu baabuurkiisu socdo dariiqa, halkaas oo uu hurday illaa ciidanka boolisku ay dhinacyada ka galayeen.
Booliska ayaa siday sheegeen waxa uu ciyaaryahan Floyd gam’ay iyadoo uu gaadhigu socdo, subaxnimadii Isniintii, laakiin nasiib wanaag, markii uu gam’ay ayaa waxa uu lugta la helay biriigga (joojiyaha), taas oo keentay in waddada badhtankeeda uu gaadhigu taagnaado illaa ay boolisku soo gaadhayeen.
Sida warka lagu sheegay ma jiro khasaare shil oo dhacay, laakiin markii ay boolisku toosiyeen Floyd ayaa uu argagaxay waxaanu isku dayey in uu si degdeg ah u dhaqaajiyo baabuurka, balse booliska ayaa su’aalo weydiiyey.
Warbixinta booliska waxa kale oo lagu sheegay in markii uu daaqadda dejiyey ciyaartoygu ay gaadhiga ka urayeen khamri iyo waxyaabo kale oo maandooriyeyaal ah, taas oo markii ay boolisku weydiiyeen uu ku margaday jawaabteeda.
Luke Shaw Oo Laba Meelood Ka Jabay Lugta Midig iyo Wakhtiga Uu Maqnaan Doono
16/09/2015 Abdiwahab Ahmed
Ozil Oo Laga Reebay Ciyaartoyga Arsenal Ee U Safray Liverpool
04/03/2017 Abdiwahab Ahmed